वाइल्डफायरले क्यालिफोर्निया एयर क्वालिटी बनायो २०२० मा विश्वकै सबैभन्दा खराब क्यालिफोर्निया - राम्रो एयर टोली द्वारा K2020 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > वाइल्डफायरले क्यालिफोर्निया एयर क्वालिटी बनायो २०२० मा विश्वमा सबैभन्दा खराब
२०२० धेरै कारणका लागि खराब वर्ष हो तर सबैभन्दा बढी वायुको गुणस्तर क्यालिफोर्निया बाहेक विश्वको धेरैजसो क्षेत्रमा सुधार भएको देखियो। सन् २०२० मा विश्वव्यापी हावाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्याडेमिक लकडाउनले अमेरिकाले आफ्नो हवाको गुणस्तर बिग्रिएको देख्यो - विशेष गरी पश्चिम तटमा - धेरै हदसम्म धन्यवाद रेकर्ड-सेटिंग वनफायर र विषाक्त धुँवा.
सुधारिएको वायु गुणस्तर सर्वेक्षण गरिएको १०84 देशहरु मध्ये 106 XNUMX% ले रेकर्ड गर्यो, तर प्रमुख वन्य आगोबाट प्रभावित क्षेत्रहरु - जसमा अष्ट्रेलिया, साइबेरिया र दक्षिण अमेरिका पनि सामेल थिए - जसो लाभमा सहभागी भएन।
"यी घटनाहरूको परिणामस्वरूप यी क्षेत्रहरूमा ठूलो वायु प्रदूषण स्पाइक भयो, जबकि प्रशस्त हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन भयो," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सेप्टेम्बरमा वेस्ट कोस्टमा भएको आगोले वायुको गुणस्तरमा नराम्रो असर पारेको छ, जब अमेरिकाले विश्वको १०० सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरू र शहरहरूमध्ये 77 100 ओगटेको छ र क्यालिफोर्नियाका स्थानहरू यस सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन्। २०२० मा, समग्र, कण प्रदूषण - जसलाई कालिखान पनि भनिन्छ - २०१ in देखि अमेरिकामा 2020. 6.7.% बढ्यो।
अन्य देशहरूको तुलनामा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यालेन्डर बर्षका लागि अनुगमित १०22 देश र क्षेत्रहरूको २२ औं स्थान ओगटेको छ। जबकि त्यो गत वर्षको १२ औं सर्वश्रेष्ठबाट एक ड्रप थियो, वार्षिक आधारमा अमेरिकी एयर क्वालिटी अधिकांश देशहरूको तुलनामा राम्रो रह्यो।
पाकिस्तान र भारत पछि ब Bangladesh्गलादेशको सबैभन्दा खराब हवा थियो। फिनल्यान्ड र नर्वे पछि स्विडेनको स्कोर सबैभन्दा राम्रो थियो।
उक्त रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ कि अमेरिकाको सफा एयर ऐनले विगत decades दशकमा बढ्दो अर्थव्यवस्था र जनसंख्याको बावजुद वायु प्रदूषण घटाएको छ भने २०१ 2016 मा यसको स्तर फेरि बढ्न थाल्यो। हालसालैका वर्षहरूमा मौसम परिवर्तनले बढाइएको वन्य आगोको अलावा वायुको गुणस्तर पनि बढेको छ। नियामक रोलब्याक र ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत सफा एयर ऐन कार्यान्वयन को अभावले चोट पुर्‍याएको रिपोर्टले जनाएको छ।
आईक्यूएयरका अनुसार "यस प्रतिगमनले २०१ 9,700 मा अतिरिक्त,, 2018०० अकाल मृत्यु र cost billion billion अर्बको आर्थिक लागतमा योगदान पुर्‍याएको छ"।
COVID-19 एयर क्वालिटीमा प्रभाव
कोरोनाभाइरसको विस्तार सुस्त बनाउनका लागि नियमहरूले संसारका धेरैजसो भागहरूमा नाटकीय रूपमा सफा हावामा योगदान पुर्‍यायो, घरबाट काम गर्ने र कम गाडी चलाउने मानिसहरूलाई धन्यवाद। तर रोगबाट संक्रमित व्यक्तिहरू विशेष गरी कडा हिट हुनसक्दछन् यदि ती क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि फोहोर हावामा जोडिएका हुन्छन्।
"COVID-१ from बाट 7% र deaths 33% बीचको मृत्यु दीर्घकालीन वायु प्रदूषणका लागि जिम्मेवार छ," रिपोर्टले भन्छ।
वायु प्रदूषण सामान्यतया दुई कोटिहरूमा विभाजित हुन्छ: पार्टिकुलेट प्रदूषण, जसलाई कालिखो, र ओजोन पनि भनिन्छ, जसलाई प्राय जसो धुवाँको रूपमा चिनिन्छ। ओजोन ग्यास हो भने आई क्यूएयर र अन्य वायु गुणवत्ता मोनिटरहरूले मापन गरेको कण पदार्थ भनेको माइक्रोस्कोपिक कण २. mic माइक्रोन वा ठूलोको स of्द्रितता हो, जुन साँस लिन सकिन्छ र चाँडै रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्दछ। मानव कपालको चौडाई करीव mic० माइक्रोन छ।
“राम्रो कण पदार्थ अहिले मानव स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा हानिकारक हो भनेर बुझिएको छ,” रिपोर्टहरू भन्छन्। "एक्सपोजर ... लाई नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावहरुसँग जोडियो जस्तै कार्डियोभास्कुलर रोग, श्वासप्रश्वासको रोग र समयपूर्व मृत्युदर।"
वन्य आगोको छेउमा, कण प्रदूषण कार, उर्जा संयंत्र र कारखानाबाट उत्पन्न हुन्छ।
क्यालिफोर्निया देशको सबैभन्दा आक्रामक वायु-गुणवत्ता नीतिहरूको बाबजुद पनि, दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा वायु गुणवत्ताको लागि बारम्बार देशको सबैभन्दा खराब क्षेत्रहरूमा स्थान ओगटेको छ।
गत वर्षको आईक्युएयर रिपोर्टले पत्ता लगायो कि लस एन्जलस काउन्टी देशको २ 14 सबैभन्दा खराब शहरहरूमा १ 25 वटा रहेको थियो र कणिक प्रदूषणका लागि इनल्यान्ड साम्राज्यको थप तीनओटा योगदान रहेको थियो।
अघिल्लो तीन वर्षको औसतमा हवाको गुणस्तरको वार्षिक रिपोर्ट जारी गर्ने अमेरिकी फेफुली संघले २०२० को अध्ययनमा थोरै मात्र राम्रो चित्रण गर्यो। वर्षभर कालिखान स्तरहरूको लागि, सैन बर्नार्डिनो काउन्टी देशव्यापी पाँचौं खराब क्रमशः, रिभरसाइड काउन्टी आठौं र लस एन्जलस पन्ध्रौं स्थानमा थियो। दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा, लस एन्जलस काउन्टीले एकल-दिन कालि स्तरहरूको लागि शीर्ष २ 2020 बनायो।
ओजोन - वा धुम्रपानका लागि - लुung्ग एसोसिएसनको एउटा गम्भीर विश्लेषण थियो: पाँचवटा काउन्टी लस एन्जलस मेट्रो क्षेत्र देशको स्मोगिष्ट क्षेत्र थियो, २१ वार्षिक रिपोर्टहरूमा २० औं पटक क्षेत्र यो सूचीमा माथि छ।
उक्त रिपोर्टलाई अझ तोडेर स्यान बर्नार्डिनो काउन्टी धूम्रपानको लागि मुलुकको सबैभन्दा खराब काउन्टीको रूपमा नामाकरण गरिएको थियो र त्यसको पछि रिभरसाइड र लस एन्जलस काउन्टीहरू थिए। ओरेन्ज काउन्टीले धुम्रपानको लागि पनि असफल ग्रेड प्राप्त गर्‍यो जबकि यो देशको २ 25 सबैभन्दा खराब अवस्थाको सूचीमा सूचीबद्ध गरिएको थिएन।
आगो धुवाँबाट क्यालिफोर्नियाका सबै प्रदूषित शहरहरू
२०२० मा अमेरिकाको १,1,412१२ शहर र शहरहरूको सर्वेक्षणमा आइक्यूएयरले पत्ता लगायो कि कणिक प्रदूषणका लागि सबैभन्दा खराब २ worst मध्ये २ 2020 क्यालिफोर्नियामा थिए। तर किनभने मध्य र उत्तरी क्यालिफोर्नियामा जंगली आगोले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पा had्यो, तीमध्ये एउटा दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा थियो - लस एन्जलस काउन्टीको डेल रे।
एउटा ठूलो परिवर्तनमा, यो dirtiest हवा संग शहरी क्षेत्रहरु अब थिएन। देशव्यापी तल्लो स्थानमा श्रेणीबद्ध गरिएको योसेमाइट लेक्स र त्यसपछि ओखुर्स्ट, योसेमाइट राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक, त्यसपछि सेक्रुआ नेश्नल पार्क बाहिर स्प्रिंगभिल थियो।
तर यो संसारमा कहीँ खराब थियो।
Worldwide,4,744 शहरहरू र शहरहरूमा विश्वव्यापी सर्वेक्षण गरिएको, योसेमाइट लेक २ 233 औं खराब हो। यो एक मात्र अमेरिकी स्थान हो जुन अमेरिकी एयर क्वालिटी इन्डेक्समा कम्तिमा पनि "मध्यम" वार्षिक रेटिंगमा पुग्न असफल भयो, जसले sensitive 37.8.। को कण पदार्थको एकाग्रता दर्ता गर्‍यो जसले यसलाई "संवेदनशील समूहहरूका लागि अस्वस्थ" भनेर योग्य बनायो।
संसारमा सबैभन्दा खराब? ११०.२ को आंशिक एकाग्रतासहित चीन, १० followed..110.2 मा भारत पछि गाजियाबाद, जो दुबैलाई "अस्वस्थ" रेटिंगका लागि योग्य बनायो। होतानसँग एक महिनाको "खतरनाक" रेटिंग थियो र अर्को "धेरै अस्वस्थ" थियो, जबकि गाजियाबादमा तीन दिनको "धेरै अस्वस्थ" हवा थियो।
योसेमाइट लेकहरू आगोको बखत दुई महिनाका लागि "अस्वस्थ" स्तरमा पुगेका थिए, जबकि ओखुर्स्ट सेप्टेम्बरमा, एक महिनाको लागि "धेरै अस्वास्थ्यकर" पुगेका थिए र अर्को महिना "अस्वस्थ" थिए। तर तिनीहरू सँगै मिलेर सात महिनासम्म उच्चस्तरको वायु गुणवत्ताको उच्च स्तरको लागि संयुक्त बनाए, विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई "लक्ष्य" भने।